Kutheni le nto kubalulekile ukuya ecaweni? Fumanisa i-Intanethi ▷ ➡️ kwi-Intanethi
Kutheni le nto kubalulekile ukuya ecaweni?. ICawa yi Indawo apho amaKristu ahlangana khona ukuze afunde okungakumbi ngeLizwi likaThixo nokukhuthazana. Yindawo efanelekileyo yokuhlangana nabantu abafuna uThixo ngoYesu.
Amakholwa amaninzi akholelwa ukuba akuyomfuneko ukuya ecaweni ukuze uhambe ngendlela yokholo. Nangona kunjalo, oku kwenzeka kuba bengayazi eyona ntsingiselo yeCawe. Ngesi sizathu sinalo, ukusukela fumanisa.online, siye sabona kufanelekile ukuba sichaze yintoni iCawa kwaye kutheni kubalulekile ukuya kuyo.
Masingayeki ukuhlangana, njengoko abanye beqhele ukwenjenjalo, ukuba asikhuthazi, kwaye ngakumbi ngoku njengoko sibona ukuba usuku lusondele.
1 Ithini icawe?
2 Kutheni le nto kubalulekile ukuya ecaweni?
2.1 1. Icawe ngumzimba kaKristu
2.2 2. Inceda ukujongana neziphako zethu
2.3 3. Kukunceda ukhule ngokomoya
Icawa yingqokelela yabo bonke abantu abathanda nabalandela uYesu. Ibhayibhile ibiza iBandla ukuba lingumzimba kaKristu. Ikholwa ngalinye lilungu lomzimba lowo. KuKristu onke amakholwa amanyene kwaye awanakwahlulwa. Ukuba usindisiwe, umanyene neCawe iphela. Icawa nayo nayiphi na indawo apho amalungu eCawa likaKristu ahlangana khona ukunqula uThixo ngokudibana.
Nathi, nokuba sibaninzi, sibumba umzimba omnye kuKristu, kwaye ilungu ngalinye limanyene kuwo onke amanye.
Phambi kwecawa, kwakukho izindlu zesikhungu, ezazizindawo apho AmaYuda ahlanganisana ukuze adumise uThixo kwaye nifunde ngakumbi ngezibhalo kunye. UYesu waya kwizindlu zesikhungu kunye nabafundi bakhe, esinika umzekelo.
Emva kovuko kunye nokunyuka kukaYesu, abafundi baqala ukuhlangana rhoqo ukudumisa uThixo bafunda njengoko babesenza ngaphambili ezindlwini zesikhungu. Baqala ngokudibana kwintendelezo yetempile nasemakhaya abo, ke kwiindawo ezinkulu xa benamalungu amaninzi. Yavela njalo ke icawe njengokuba sisazi namhlanje.
Abazange bayeke ukuhlangana etempileni usuku olunye. Kwindlu ngendlu baqhekeza isonka kwaye babelana ngokutya ngovuyo nangobubele.
1. Icawe ngumzimba kaKristu
ICawe nguMzimba kaKristu. Akukho lungu lomzimba linokuhlala lodwa, ngaphandle komzimba uphela. Uthanda ungathandi, abantu abasecaweni lusapho lwethu kwaye kufuneka sifunde ukuhlala nabo (ngakumbi kuba sizakuhlala ngonaphakade nabo).
Nokuba iliso alinakuthi kwisandla: Andikudingi, akukho nentloko ezinzwaneni; andikudingi.
Endaweni yoko, amalungu omzimba abonakala ngathi abuthathaka yeyona nto ifunekayo.
Eyesi-1 kwabaseKorinte 12: 21-22
2. Inceda ukujongana neziphako zethu
Akukho namnye ebandleni ofezekileyo, nkqu nomfundisi. Umpostile uPetros wazenza iimpazamo njengenkokeli kwibandla lokuqala. Icawa ayikaze ibe yindawo yabantu abafezekileyo. UThixo wayalela iBandla ukuba lihlangane ukuze lisombulule ukungafezeki kwethu.
Wanga uxolo lukaKrestu lungalawula iintliziyo zenu, kuba nabizelwa kwakulo mzimba mnye. Yiba nombulelo. Ilizwi likaKristu malihlale ngaphakathi kwenu ngokobutyebi balo; fundisani, nicebisane ngabo bonke ubulumko; Cula iindumiso, amaculo, neengoma zokomoya kuThixo, ngombulelo osuka entliziyweni.
3. Kukunceda ukhule ngokomoya
Amalungu ebandla ayanceda, akhuthaze, athuthuzele, akhalimele, afundisane ngothando lukaThixo. Abasoloko beyifumana ngokuchanekileyo, kodwa yinkqubo yokufunda kunye. Sikhula ngakumbi ngokomoya xa sikunye njengecawe kunalapho umntu ngamnye ehlukanisiwe.
Ke, sinyanisile eluthandweni, masithi ezintweni zonke, sikhulele, entlokweni kaKristu; ophuma kuye umzimba uphela, ulungelelaniswe kakuhle, wamanywa onke amalungu anokuncedana, ngokomsebenzi welungu ngalinye, ukhula ngokokuze uzakhe eluthandweni.
Efese 4: 15-16
Akukho ngxaki ekubeni necawe yendlu, kodwa xa kukho abantu abaninzi iba yinto engathandekiyo. Inani elithile labantu, kulungile ukuba nendawo enkulu yokuhlangana rhoqo. Ubume becawa obusemthethweni bunceda ukuhlela amaqela amakhulu. Yintoni egqithisile, Icawe yindawo ebonakalayo apho nabani na anokungena khona esitalatweni ngaphandle kwesimemo.
Siyathemba ukuba uyaqonda ngoku kutheni kubalulekile ukuya ecaweni. Siyazi ukuba abantu abaninzi bayaphoxa xa bebona umfundisi okanye ilungu elithile izimo zengqondo ezingezozabuKristu. Nangona kunjalo, kunjalo Kubalulekile ukuba unganikezeli kwaye uncede abanye bafumane indlela kaYesu. Gcina ukhumbula ukuba amalungu ecawa ngabantu abaneziphene kunye nokuziphatha okuhle njengawe, ke ngoko, eyona ndlela yokwakha uMoya kaThixo kukumanyana eCaweni.
Siyathemba ukuba eli nqaku beliluncedo kuwe. Ukuba ufuna ukwazi uyifunda njani ibhayibhile ukuze uyiqonde. Sicebisa ukuba uqhubeke ukhangela Fumanisa kwi-intanethi.